भारत देखि नौकरी खोज गर्ने मान्छेहरुको लागि वीजा जानकारी 🥇 - काम को लागि गाइड
दुबई मा नौकरिया
के मलाई दुबई को लागि भिजा को आवश्यकता हुनेछ?
के मलाई दुबई को लागि भिजा चाहिए? यो एक प्रश्न हो जसलाई तपाईं जवाफ दिन चाहिए। भर्ती बजार मा साल को अनुभव संग प्रवासियों को लागि हाम्रो विस्तृत गाइड संग दुबई मा नौकरी प्राप्त को तरिका मा एक विस्तृत गाइड छ। धेरै सारा अन्तर्राष्ट्रीय नौकरी खोजने वाला हो। उनि सबै दुबई मा नौकरी प्राप्त को मांग गर्दै छन्। हाम्रो विस्तृत गाइड संग, तपाईं आफ्नो मौका बढांगे। तपाईंलाई धेरै सी सानो चीजहरू हो जुन तपाईंलाई पालन गर्न आवश्यक छ। साधारण तरिका मा, मध्य पूर्व मा नौकरी को खोज गर्न देखि तपाईंको प्रयास र समय लगेगा। हाम्रो टीम ले तपाईंको लागि धेरै विस्तृत गाइड तैयार गरेको छ।
यस कुरा को ध्यान मा राखन, हाम्रो टीम UAE को पहिचान गर्न को लागि नयाँ प्रवासियों को मदद गरेर रही छ। साधारण तरिका मा कुरा करे त तपाईंलाई दुबई जाने मा सबै प्रकार को सम्पूर्ण जानकारी को आवश्यकता हुनेछ। हरेक तरिका देखि, यदि तपाईं मध्य पूर्व मा प्रवासी बनना चाहते हो त दुबई मा नौकरी मा जाने को लागि तपाईंलाई निश्चित रूप देखि हाम्रो 10 चरण को मार्गदर्शिका को पालन गर्नु हुनेछ। हाम्रो टोली सधैं दुबई, अबू धाबी र शारजाह मा नौकरी खोज गर्ने मान्छे को मदद गरिरहेको छ।
अनलाइन तपाईंलाई धेरै साईट मा पुराना ज्ञान मिलेगी। विशेष रूप देखि पुराना ब्लग मा काम को लागि दुबई कसरि जान यो मा। विशेषज्ञको हाम्रो टोली तपाईंको नौकरी खोज मा तपाईंको सहायता गर्न को लागि उत्सुक छ। दुबई सिटी कम्पनी दुबई मा करियर खोज को बारे मा जानकारी प्राप्त गर्न सफलयाब रही। संयुक्त अरब अमीरात सरकार देखि भिजा कसरि प्राप्त गर्नुहोस र यसको अलावा फ्लाइंग्स कसरि बुक गर्नुहोस र संयुक्त अरब अमीरात मा रहन को लागि फ्लैट कसरि खोज्नुहोस। यो विस्तृत गाइड मुख्य रूप देखि उन मान्छे को लागि छ जो विदेश मा रह रहे हो र संयुक्त अरब अमीरात मा काम को खोज मा हो।
स्टेप नम्बर 1। दुबई गाइड को बारे मा जानना
दुबई विशेष रूप देखि नौकरी खोज गर्ने मान्छेहरु को लागि पृथ्वी मा स्थानहरु मध्ये देखि एक छ। तपाईंलाई यो जान्दछ कि दुबई शहर कहां स्थित छ। मध्य पूर्व मा सबै भन्दा ज्यादा रुचि गर्न योग्य के छ? के यो एक होटल उद्योग या तेल र गैस छ, र पुरे शहर को संरचना कैसी छ? अर्को तिर, तपाईंलाई दुबई शहर को जानना हुनेछ। अद्भुत सांस्कृतिक विरासत को बारे मा राम्रो तरिका देखि ठेगाना हो। यसको अलावा, मध्य पूर्व स्थानीय मान्छे संयुक्त अरब अमीरात को हरेक आगंतुक को स्वागत गर्दै छन्। र निश्चित रूप देखि, पाकिस्तान देखि मुस्लिम नौकरी तलाशने वालों को लागि। दुबई उदार दृष्टिकोण मा नयाँ आगंतुकों को लागि एक संस्कृति शिष्टाचार छ। तपाईंलाई एक अझै अर्को चीज जान्छ को आवश्यकता हो कि यूएई शीर्ष स्थान मा छ।
दुबई मा इस्लाम धर्म छ र हर नयाँ एक्सपैट को साल भर धूप वाला जीवनशैली को अपनाना हुनेछ। तल दिइएको तस्वीर मा क्लिक गर्नुहोस। र दुबई को बारे मा तपाईंलाई के ठेगाना हुनु पर्छ उसलाई जान। के मलाई दुबई को लागि भिजा चाहिए? यो वास्तव मा सबै निर्भर गर्दछ कि तपाईं कहां देखि हो। युरोप र क्यानाडा को अधिक मान्छे भिजा प्राप्त गर्ने मा सक्षम हो। भारतीय प्रवासी मान्छे के लागि यो धेरै कठिन छ।
स्टेप नम्बर।2संयुक्त अरब अमीरात र भिजा जानकारी
दुबई को जानना उतना नै महत्वपूर्ण छ। यो जानना छ कि के तिमी संयुक्त अरब अमीरात मा प्रवेश गर्न को योग्य हो। अर्को तिर, तपाईं संयुक्त अरब अमीरात को यात्रा को योजना बनाउन देखि पहिले तपाईंलाई आफ्नो पासपोर्ट र भिजा आवश्यकताहरु को जांच गर्न हुनेछ। यो एक स्मार्ट चाल हुनेछ। एक सौ प्रतिशत देखि अधिक सुनिश्चित गर्नुहोस कि तपाईं सुरक्षित रूप देखि यात्रा गरेर सक।
के दुबई संग अमीरात को लागि पनि भिजा को आवश्यकता छ? हां, जब तपाईं संयुक्त अरब अमीरात मा उतरते हो त तिमी आफ्नो हात मा भिजा तैयार राखन को आवश्यकता हुन्छ। यसको अलावा, तपाईंलाई यूएई भिजा को जानकारी को लागि आवेदन गर्न हुनेछ। अमीरात एयरलाइन ले तपाईंको लागि सम्पूर्ण जानकारी राखी भयो। त तपाईंलाई यो धेरै सावधानी देखि पढना चाहिए, र यो ठेगाना लागाना चाहिए कि यात्रा को संदर्भ मा तपाईंलाई के चाहिए।
धेरै देशहरूमा वैध भिजा हुनु आवश्यक थियो। र कम देखि कम छह महिना को लागि वैध पासपोर्ट प्राप्त गर्न को लागि, अर्को तर्फ, राजनेताओं जस्तै गैर-मानक पासपोर्ट धारक पनि हो। यस कारण देखि यस चरण मा संधै सुनिश्चित गर्नुहोस कि तपाईंको नजिकै एक राम्रो नौकरी को आवेदन छ। दुबई जाने को लागि कृपया यात्रा दस्तावेजहरु के के आवश्यकता हुन सक्छ, यसको जांच गर्नुहोस। जस्तै कि उल्लेख गरिएको छ कि अमीरात को नजिकै क्यारियर खोजने वालों को लागि अलग प्रवेश आवश्यकताए छ। उन परिस्थितियों मा, यस चरण मा कृपया यसलाई दुबई मा चल रहे वक-यिनी इंटरव्यू पनि जाँचे। UAE मा प्रवेश गर्न योग्य हुनु को लागि तपाईंलाई भिषा को लागि आवेदन गर्न को आवश्यकता हो। यसको अलावा, संयुक्त अरब अमीरात को लागि अन्य पासपोर्ट आवश्यकताहरु लाई पढ्नुहोस।
स्टेप नम्बर।3भिजा को प्रकार देख्यो
स्टेप नम्बर3मा हामिलाई एक यस्तो प्रकार को भिजा खोज्नु हुनेछ जुन हामीलाई आवश्यक हुन सक्छ। उदाहरण को लागि, हाम्रो नजिकै 90 दिन को लागि दीर्घकालिक एकल प्रवेश भिजा-पर्यटक हुन सक्छ। र दुबई मा कामकाजी भिजा संग नै नै साधारण छुट्टी को उद्देश्य को लागि 30 दिन र 14 दिनो को। यिनी बिंदुहरु को देखते भएका, government.ae पोर्टल मा जानुहोस्। हेर्नुहोस कि तपाईं किस भिजा को हासिल गर्न सक्छन् र उनको बारे मा जाना। तल तपाईं भिषा अवधि को लागि शर्टकट ले सकते हो।
मेरो नजिकै के लायकात होनी चाहिए, या के दुबई जाने देखि पहिले ले मलाई भिजा चाहिए हुनेछ? उन सबै प्रश्नहरु को उत्तर को तपाईं सरकार.ae वेबसाइट मा जाकर पा सकते हो। तपाईंको नजिकै धेरै विकल्प हो, र तपाईंको पास विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। विशेष रूप देखि सबै भन्दा राम्रो र योग्य विश्वसनीय स्रोतहरु मध्ये देखि। र संयुक्त अरब अमीरात सरकार को तुलना मा केहि पनि विश्वसनीय छैन। दुबई र अबू धाबी मा तपाईं आफ्नो नौकरी खोज संग सम्बन्धित अन्य जानकारी पनि पा सकते हो। Government.ae वेबसाइट को मदद देखि एमबीए डिग्री र संयुक्त अरब अमीरात मा काम गर्न चाहने वाला को मदद मिलिरहेको छ।
दीर्घकालिक पर्यटक भिजा - नयाँ प्रवासियों को लागि अत्यधिक अनुशंसित!
30- दिनसीय पर्यटक भिजा, जो 40 दिन सम्म बढाया जान सक्छ - नौकरी खोज्ने वालों को लागि सिफारिश गरेन।
14- दिन को सेवा भिषा, केवल छुट्टियों को लागि, प्रवासी नौकरी चाहनुकहरुको लागि छैन।
30- दिन को भेटिन्छ भिजा, जो 30 दिन सम्म बढाया जान सक्छ।
स्टेप नम्बर4अब दुबई जाने देखि पहिले तपाईं भिषा बुक गरेर सकते हो
ठीक छ, अब हामी जान्दछ कि तपाईं दुबई मा प्रवेश गर्न सक्छन् या नहीं। तिमीलाई थाहा छ कि भिजा को के हुन्छ चाहे चाहे महिला प्रवासी को लागि पनि। अर्को कदम हामी पालन गर्न चाहिए त्यो छ संयुक्त अरब अमीरात मा प्रवेश गर्न को लागि भिजा बुक गर्नुहोस। हाम्रो कम्पनी ले त्यो मा लंबा संशोधन गरे थियो। र सबै भन्दा सजिलो बुकिंग प्रणाली एतिहाद यूएई भिजा प्रणाली हो। सकारात्मक तरफ, यदि तपाईं यूएई सरकार को सूची को देशों देखि हो। साधारण तरिका मा कुरा करे त तपाईं यूएई मा प्रवेश गर्न देखि पहिले भिजा को आवश्यकता छैन। उदाहरणका लागि, यदि तपाईं अबु धाबी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मा उतरते हो। केहि नै मिनेटहरुमा, हवाई अड्डा को कर्मचारी तपाईंको लागि एक इमिग्रेशन प्रक्रिया जारी गर्नेछन्। र एक पल मा तपाईंलाई आगमन मा भिजा प्राप्त हुनेछ .जबकि एतिहाद को उडान को लागि के मलाई दुबई को लागि भिषा को आवश्यकता छ? चूंकि तपाईं केवल उडान भरने को योजना बना रहे हो, यसैले भिजा राखन को आवश्यकता छैन। जब तपाईं एक उड़ान बुक गर्छन, त तपाईंलाई यसको आवश्यकता हुन्छ। तर सकारात्मक तरफ, तपाईं यसलाई अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ। संयुक्त अरब अमीरात मा सुरक्षा नौकरिहरु शुरू गर्न मा पनि कुनै समस्या छैन। तर अन्य वेबसाइटहरु मा पनि एक नजर डालें। स्मार्ट बनें र मूल्यहरु को तुलना गर्नुहोस।
दुबई ईतिहाद UAR भिषा बुकिंग पृष्ठ पर जाना
एयररबिया कागजातजीकरण र भिजा http://www.airarabia.com/en/uae-visa
दुबई उडान फ्लाई देखि पहिले अमीरात भिजा सेवाहरु
फ्लाईदुबई दुबई स्थानांतरण र संयुक्त अरब अमीरात को लागि भिजा सहायता
स्टेप नम्बर5दुबई मा रहन को लागि ठाँउ खोजना
दुबई जाने देखि पहिले, तपाईंलाई दुबई मा सर्विस्ड अपार्टमेन्ट्स को खोज र उन मा ध्यान दिन को आवश्यकता हो। यस कारण देखि, तपाईंलाई एक धेरै सस्ता कोठा देखना चाहिए। यसको अलावा, विशाल कोठा लेना तपाईंको लागि उपलब्ध छैन हुनेछन्। बेशक, तपाईं आफ्नो परिवार को लागि बिना बिना अगाडी बढन को आवश्यकता छ। लामो समय पछि उनि केवल खर्च बढएंगे। धेरै पहिले नै नै जब तपाईं दुबई जान्छन् त तपाईं मुद्रा बचाव को आवश्यकता हुन्छ। विशेष रूप देखि मलेशिया वा भारत जस्तै देशहरू देखि आनेवालों को लागि। फ्लैट या कोठा को लागि जितना कम खर्च गर्न सक्छन् यति कम खर्च गर्नुहोस। तपाईंलाई प्राथमिकता दिनुहोस साझा आवास खोजना हुनेछ। तपाईं फ्लैट मालिकों को इमेल द्वारा संपर्क गरेर सकते हो। यस अघि पहिले तपाईं संयुक्त अरब अमीरात मा चले जान, यो सुनिश्चित गर्नुहोस कि तपाईंको नजिकै सबै केहि हो। यसको अलावा, अबु धाबी र शारजाह मा एक कोठा को खोज गर्न पनि राम्रो युक्ति हो। किराए मा लेने को लागि पनि धेरै सस्ता फ्लैट उपलब्ध हो।
के मलाई दुबई को लागि भिजा चाहिए हुनेछ? हाँ, तपाईंलाई यसको आवश्यकता हुनेछ, र एक टिप छ। तेजी देखि काम गर्ने वाला वीजा प्राप्त गर्न को लागि, तपाईं संयुक्त अरब अमीरात मा प्रबंधन नौकरिहरु को लागी आवेदन गर्न सक्छन्। किनकी यस तरिका तपाईं एक राम्रो आवास खोज मा तपाईंलाई सहायता मिलेगी। सिर्फ यसैले कंपनियां तपाईंलाई किराए मा लेने को लागि अधिक धनराशि निवेश गर्नुहोसगी। र यो कुरा को ध्यान मा राखे, नयाँ आवास को संभावनाहरु ठूलो लाभकारी बन जाएंगी।
चरण संख्या6दुबई मा दुबई र बुक छूट फ्लाइट दुबई मा जा रहेको छ
हामी सबै जान्दछन् कि नयाँ नौकरी खोज्ने मान्छेहरूको लागि उडानहरू सस्ती छैन। त आफ्नो खर्चहरु लाई जितना कम गर्न सक्छन् त कम कम राखन को प्रयास गर्नुहोस। दुबई को लागि उडानहरु मा छूट खोज्नुहोस। अर्कोतर्फ, दुबई अझै पनि मध्य पूर्व नौकरिहरु को रिक्तियों को लागि मुख्य आधार बना भयो। तर तपाईं अबू धाबी को लागि पनि उडानहरु खोज सकते हो। दुबई मा जाना सधैं महंगा रहेको छ। कुनै फर्किएन कि तपाईं कुनै को सल्लाह खोजे। नकारात्मक तरफ, तपाईंलाई केहि पैसा बचत को आवश्यकता हुनेछ। किनकी जब तपाईं यूएई मा उतरते हो। तपाईंलाई पैसा राख्नु हुनेछ। संयुक्त अरब अमीरात मा रहना थोडा महंगा छ।
स्टेप नम्बर7बस अझै पुगे, मोबाइल देखि तैयार रहयो!
तपाईं दुबई हवाई अड्डा मा पुगे तब देखि तपाईंलाई नौकरी खोज को लागि तपाईंलाई आफ्नो मोबाइल फोन को तैयार राखन को आवश्यकता हुनेछ। यस कारण देखि, हामी तपाईंलाई थोडा सा गर्छन गर्छन। संयुक्त अरब अमीरात मा दुई मुख्य मोबाइल सेवा ओपरेटर हो। उनि सबै प्रवासी मान्छे को लागि उपलब्ध हो। एटिसलाट र डु, दुबई जाने को समयमा दुवै एक नयाँ प्रवासी को रूप मा तपाईंको लागि राम्रो हो। यो सब निर्भर गर्दछ कि प्री-पेड मोबाइल सेवा प्राप्त गर्न को लागी तपाईंलाई व्यवस्था को आवश्यकता हो। UAE मा मोबाइल को सम्बन्ध मा धेरै अंतर छैन। दुई ओपरेटरहरु को बीच मुख्य अंतर यो छ कि डु मोबाइल प्रदाता प्रयोगकर्ता को केवल प्रति सेकंड चार्ज गर्दछ। र अर्को तिर, एटिसलाट प्रति मिनेट शुल्क लेते छ। तर तपाईंलाई चिन्ता गर्ने आवश्यकता छैन। दुवै मोबाइल ओपरेटर सरकार द्वारा नियंत्रित गरेको छ र प्रयोगकर्ताहरुलाई बचाया जान्छ। एक र सुझाव यो छ कि उनि न केवल UAE मा काम गर्दै छन्। धेरै देखि भारतीय श्रमिक कुवैत मा पनि हो जो वर्तमान मा यसको उपयोग गर्दै छन् .फोन भएको देखि के मलाई दुबई को लागि भिषा चाहिए? हां ... तपाईसँग2मुख्य विकल्प छ।
दुबई मा एटिसलाट मोबाइल फोन
दुबई मा डू मोबाइल फोन
स्टेप नम्बर 8 दुबई को लागि आफ्नो रिज्यूमे र कवर लेटर तैयार गर्न
दुबई मा भर्तीकर्ता प्रबन्धक प्रत्येक सीवी को खोज मा रहछन। तर नकारात्मक कुरा यो हो कि प्रत्येक रिज्यूमे मा लगभग 2-5 सेकेन्ड मात्र हेर्न्छ। त तपाईंलाई आफ्नो पेशेवर विवरणहरु लाई विस्तारित गर्न को लागि अद्भुत र बिना गलती वाला रिज्यूमे तैयार गर्न को आवश्यकता हो। कम शब्दहरुमा, तपाईंको CV 2-3 पृष्ठहरु भन्दा अधिक हुनु हुँदैन। तपाईंको सम्पूर्ण सीवी मा केवल पेशेवर जानकारी शामिल हो। म्युचुअल रिज्यूमे लेखन को Forbes.com द्वारा पोस्ट गरिएको छ। 2018 र 2019 मा कैरियर खोज्न मान्छे को लागि एक ठूलो चर्चा छ। सीवी लेखन मा के गरे जान पर्छ र के नहीं यो यो लेख मा अगाडी कुरा गर्नेछन्।
तर सीवी लेखन मा केहि अपवाद हो। उदाहरणका लागि, यदि तपाईं दुबई मा सीनियर स्तर को स्थिति को लागि आवेदन गर्दै छन्। हरेक करियर खोज गर्न वालो को लागि एक अनोखा तरीका हुन्छ। अधिकांश भाग को लागि, यदि नौकरी को परिस्थितियों को आवश्यकता हो। तपाईंलाई आफ्नो रिज्यूमे को3पृष्ठ सम्म बढाना चाहिए। समय-समय मा संसार को केहि देश मा, सीवी को आफ्नो तरीका छ। साधारण तरिका मा कुरा करे त केहि सीवी धेरै साना हुन्छन्। तिमी मध्य पूर्व मा फोर्ब्स मा एक नजर राखन चाहिए, यो नौकरी खोजने वालों को लागि एक आदर्श रिज्यूमे गाइड हो।
अर्को तिर, तपाईं सीवी लेखन को लागि पेशेवर अधिकारियों को नजिकै पनि यो सेवा ले सकते हो। उदाहरणका लागि Peopleperhour सीवी लेखकहरू। तपाईं एक धेरै राम्रो सीवी लेखक को लगभग $ 30 भुगतान गरेर को किरा मा ले सकते हो। तर यदि यो तपाईंको लागि धेरै धेरै हुन सक्छ। तपाईं Fiverr.com मा सिर्फ $5जितने कम दाम मा सीवी प्राप्त गर्न सक्छन्। आफ्नो सीवी को उचित गर्न को धेरै तरिका हो। तर तपाईं यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। तल तपाईंको पास Independent.co.uk विस्तृत गाइड छ, यो पढे।
स्टेप नम्बर9सोशल प्रोफाइल सिर्जना
अर्को चरण मा जाने देखि पहिले र दुबई मा काम शुरु गर्न देखि पहिले, तपाईंलाई पेशेवर सोशल प्रोफाइल बनाउन को आवश्यकता हो। हाम्रो कम्पनी ले एक पूरा सूची बनाएको छ। प्रत्येक भर्ती पोर्टल को लागि एक विस्तृत विवरण को रूप मा। यसको अलावा, हामी दुबई को शीर्ष रेटिंग वाला सोशल मीडिया कम्पनीहरु को पनि राखयो छ। तपाईंलाई आफ्नो प्रोफाइल बनाउन सुरु गर्नु आवश्यक छ। विदेशियों को लागि करियर खोज को कुनै जादुई कुंजी छैन। यस चरण संग, तपाईंलाई प्रत्येक वेबसाइट मा एक धेरै विस्तृत प्रोफाइल बनाउन को आवश्यकता हो। त यो सही गर र आफ्नो नौकरी खोज मा अगली अंतिम प्रक्रिया मा जानुहोस्। के मलाई दुबई को लागि भिजा चाहिए? यहाँ सम्म कि लिंक्डइन मा पनि?
वैसे, वहाँ तपाईं धेरै सारा कम्पनीहरु को खोज गर्न सक्छन्। उदाहरण को लागि, अमीरात ग्रुप लिंक्डइन मा भर्ती गर्दै छन्। अर्कोतर्फ, Automotive Corporsors Exeटी को खोज मा हो। कुनै को लागि लगभग अनंत अवसर हो। यसैले, हाम्रो कम्पनी नौकरी खोजने वालों को धेरै मजबूत प्रोफाइल राखन को सल्लाह दि्छ। किनकी वास्तव मा, तपाईं आफैले देखि पूछ सकते हो कि के मलाई दुबई को लागि भिजा को आवश्यकता छ? र फेरि अवसर आउँछ। र तपाईंलाई सबकुछ मिल सक्छ।
स्टेप नम्बर। 10 दुबई सिटी कम्पनी को उपयोग गरेर
दुबई सिटी कम्पनी मा हामी दुबई जान मा तपाईंको सहायता को लागि यहां हो! हाम्रो अद्भुत भर्ती सेवाहरु संग तपाईं निश्चित रूप देखि UAE मा एक सपनाहरु को करियर प्राप्त गर्नेछन्। वास्तव मा, हाम्रो लक्ष्य तपाईंलाई दुबई मा ले जाने मा मदद गर्न छ। हाम्रो अंतिम लक्ष्य तपाईंको लागि नौकरी खोजना छ। तर हामिलाई आशा छ कि तपाईं हाम्रो सेवा को उपयोग गर्नेछन्। र तपाईं हाम्रो कम्पनी रुचि गर्नेछन्। हामी जो सेवाहरु प्रदान गर्दै छन् उनि वास्तव मा सहायक हो। वास्तव मा, उनि सबै नि: शुल्क हो।
अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिकहरुको लागि दुबई मा हाम्रो कम्पनी प्रसिद्ध छ जो पहिले देखि नै पचास हजार देखि अधिक विदेशीहरु लाई मुफ्त युक्तिहरु र उत्तर प्रदान गरेर नौकरी मा मदद गरेर चुकी छ। उदाहरण को लागि, के मलाई दुबई मा भिजा को आवश्यकता हो, या दुबई मा काम र उचित वैद्य नौकरी साइट कसरि खोज्नुहोस? त्यो सब जो हामी तपाईंको लागि प्रबंधन गर्न सक्छन्।
के मलाई दुबई को लागि भिजा को आवश्यकता हो?
भर्तीकर्ता र भर्ती प्रबन्धकसँग सम्बन्धित
लिंक्डिन मा एक ठूलो भर्ती समुदाय छ। सोशल मीडिया नेटवर्क को भित्र, तपाईं भर्तीकर्ता देखि इंडिसी तरिका देखि जुड सकते हो। अर्को तिर दुबई करियर साधक को परिप्रेक्ष्य देखि नौकरी खोज को यो सबै भन्दा राम्रो तरीका छ। हाम्रो सेवा को उपयोग गरेर अधिकारियों को तपाईंको भर्ती गर्न मा मदद मिलती छ। हाम्रो सेवाहरु संग, तपाईं दुबई शहर मा 5,000 देखि अधिक भर्ती अधिकारीहरु संग जुड सकते हो। तपाईंलाई निश्चित रूपमा सोशल मिडिया भर्ती गर्ने व्यक्तिहरूको संसारबाट जुडना आवश्यक छ। कर्पोरेट हेडहटर को विश्व मा एक नयाँ करियर को खोज को यो एक धेरै नै स्मार्ट तरिका छ।
हाम्रो लिंक्डिन सेवा संग, तपाईं निश्चित रूप देखि आफ्नो करियर को प्रचारवा दे सकते हो। अमीरात मा उपयुक्त क्यारियर को अवसर खोज को संभावनाहरु लाई दोगुना बना दे। यस समय जब सम्म तपाईं सक्रिय रूप देखि एक नयाँ नौकरी या करियर को अवसर को खोज गर्दै छन् या केवल UAE को भित्र आफ्नो करियर शुरू करे।
दुबई मा जब को लागि व्हाट्सप्प ग्रुप
तपाईं निश्चित रूप देखि मध्य पूर्व मा आश्चर्यपूर्वक रोजगार खोज गर्न सक्छन्। अग्रभूमि मा व्हाट्सएप समूह मा शामिल हो। प्रबंधकों को भर्ती गर्न को लागि आफ्नो मोबाइल फोन नम्बर जोडें। अन्य नौकरी खोजने वालों, प्रवासी र व्यावसायिक अधिकारीहरु, आम तौर मा कहे त जो अत्यधिक प्रेरित हो उनसंग जुडें। संयुक्त अरब अमीरात मा नौकरी प्राप्त को लागि अधिक प्रेरित रहयो।
हाम्रो कम्पनी ले नौकरी खोजने वालों को धेरै ग्रुप बनाए छ। वर्तमान समय सम्म व्हाट्सएप सीमित समूह। तर हामी आशा छ कि तपाईं भर्ती गर्न वालों को लागि आफ्नो अनुरोध पोस्ट गरेर सकेंगे। यसको अलावा, हाम्रो भर्ती टीम तपाईंलाई सउदी अरब मा काम गर्न मा मदद गर्न को लागि प्रसन्न हुनेछ। यदि तपाईंलाई हाम्रो ग्रुप मा मध्ये एक मा नौकरी को पेशकश मिलती छ त, यस समय, हामी तपाईंको पेशेवर विवरण को प्रतीक्षा गर्नेछन्। आफ्नो व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव को ध्यान मा राखे कृपया स्पैम टिप्पणिहरु पोस्ट न गर्नुहोस।
दुबई मा भर्तीकर्ता एजेन्सी रिज्युमे पठाइयो
दुबई सिटी कम्पनी ले दुबई मा सबै भर्ती कम्पनीहरु को एक स्थल मा राखएको छ। अब तपाईं दुबई मा शीर्ष रेट वाला भर्तीकर्ता को आफ्नो सीवी पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं एक नजर पनि देख सकते हो कि उनि कहां स्थित हो। तेजी देखि तपाईंलाई नौकरी दिलाने मा तपाईंको मदद गर्न को लागि हामी इमेल र फोन नम्बर पनि राखे हो। सकारात्मक पक्ष मा यदि तपाईं भर्ती एजेन्टहरु को यस सूची को सही तरिका देखि उपयोग गर्दै छन् त निश्चित रूप देखि, संयुक्त अरब अमीरात मा सपनाहरु को रोजगार को खोज मा तपाईंको मदद हुनेछ। दरी को बिना, तपाईंलाई भर्ती गर्ने वालों र भर्ती प्रबन्धकों को अद्यतन गर्न को आवश्यकता हो को दुबई मा नयाँ करियर को अवसरों को लागि तपाईं तैयार हो।
के मलाई दुबई को लागि भिजा चाहिए हुनेछ?
एक विशेषज्ञ को रूप मा रोजगार प्राप्त को स्टेप्स?
के मलाई दुबई को लागि भिजा चाहिए? एक विशेषज्ञ को रूप मा रोजगार प्राप्त प्रक्रिया? आशा छ कि अब दुबई मा काम गर्न को लागि तपाईंको नजिकै विस्तृत गाइड उपलब्ध छ। के मलाई दुबई को लागि भिजा चाहिए? एक प्रवासी कार्यकर को रूप मा रोजगार प्राप्त गर्न को लागि सम्पूर्ण जानकारी। संयुक्त अरब अमीरात को लागि भिषा, उडानहरु र आवास को लागि तपाईंलाई वास्तव मा के चाहिए। आशा छ कि यो जानकारी तपाईंलाई पर्याप्त ज्ञान दिछन। किनकी हामी नजिकै गर्न को लागि धेरै केहि छ। यो न भूलें कि तपाईं बैंकिंग र वित्तीय कम्पनीहरु मा पनि काम प्राप्त गरेर गर्न सक्छन्। र उनि संयुक्त अरब अमीरात मा भिजा वर्क परमिट पेश गर्दै छन्।
दुबई मा भारतीयों को लागि नौकरी को खोज
संयुक्त अरब अमीरात मा हजारहरु नियोक्ताओं को सीधा संपर्क संग एक रोजगार नेटवर्क को रूप मा अब यूएई मा, र दुबई मा सबै भन्दा राम्रो रोजगार को अवसरहरु खोज गर्न आसान बना जान सक्छ। हामी इंजीनियरिंग, इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी (सूचना प्रौद्योगिकी), वित्त, लेखा, निर्माण, आतिथ्य, स्वास्थ्य हेरविचार, प्रशासन, व्यवस्थापन, बिक्री र विपणन र धेरै अन्य नौकरी अवसरहरु को क्षेत्र मा हाम्रो रोजगार सेवाहरु संग कर्मचारीहरु र नियोक्ताओं को एक साथ मिलाया छ।
पछिल्लो धेरै सालो देखि हाम्रो सेवा ले दुबई, अबू धाबी, सउदी अरब, कतर, बहरीन र कुवैत मा धेरै पेशेवरहरु, अर्ध पेशेवरहरु, कुशल र अर्ध कुशल श्रमिकों को राम्रो नौकरी मा सेट भएको मा मदद को छ। हामी मान्छेो को भारत देखि मध्य-पूर्व को देशो मा सबै भन्दा राम्रो नौकरी दिलाने मा र उनको लागि जरूरी सबै चीजहरुको जुटाने मा विशेष सहायता गर्छन। हामी एक अनलाइन नौकरी अन्वेषण वेबसाइट हो जो सच मा नौकरी खोजने वालों को दुबई मा नौकरी को सम्पूर्ण जानकारी प्रदान गर्दछ।
दुबई सिटी कम्पनी व्यापक रोजगार सूची र अनलाइन रोजगार सेवा प्रदान गर्ने वाला सबै भन्दा ठूलो र सबै भन्दा व्यापक रोजगार साइटहरु मध्ये एक छ जसमा UAE मा रोजगार को अवसरों को खजाना शामिल छ। हामी जान्दछ कि प्रत्येक नौकरी खोजने वाला परिस्थिति अनुठी छ त्यसैले हामी तपाईंको आवश्यकताहरु अनुरूप प्राथमिकता दि्छ र परिणाम प्रदान गर्छन। हामी दुबई मा नियोक्ताओं को सीधा रेज्यू को सिफारिश को र अग्रेषित गर्छन ताकि तपाईं को अन्यो को मुकाब अग्रिमता मिले।
दुबई सिटी कम्पनी आफ्नो सालो को अनुभव र व्यापक नेटवर्क देखि नौकरी इच्छुकों को सहायता गर्दै छन्। दुबई मा नौकरीओ को डाटाबेस उद्योग मा सबै भन्दा व्यापक मानिन्छ, र धेरै व्यवसायहरु मा लगातार नयाँ रिक्तो संग अद्यतन गरिन्छ। नौकरी खोज गर्ने वाला अनुप्रयोगहरु लाई हाम्रो मैन्युअल चयन प्रक्रिया को माध्यम ले चुना जान्छ, हामी मैन्युअल चयन चुन्नुहोस हो, किनकी धेरै स्वचालित सिस्टम महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी को अनदेखा गर्छन, र फेरि 24 घन्टा को भित्र यूआईए मा कोयोक्ता को लागि चुने गए आवेदनों को सिफारिश को जान्छ, जसबाट आवेदकहरुलाई लाभकारी हुन्छ।
एक भारतीय स्नातक यूएई मा काम कसरि खोजे?
क्या तपाईं दुबई मा नौकरी को खोज मा छ? 2016 को साल थोडा माथि-तल रहेको छ, तर त्यो पछि, चीजहरु बदल रहे हो। लिंक्डइन को "मध्य पूर्व र उत्तरी अफ्रीका भर्ती रुझान 2017" को रिपोर्ट को अनुसार, दुबई को व्यापार को 2017 मा धेरै नयाँ नौकरिहरु आने वाला छ।
जहां सम्म सबै भन्दा ज्यादा मांग गरे जान्छ कौशल को प्रश्न हो, यो रिपोर्ट दुबई मा रोजगार इच्छुकों को लागि शीर्ष योग्यता को बीच स्टेटिस्टिकल एनालिसी (सांख्यिकीय विश्लेषण), डाटा माइनिंग (खनन), पब्लिक पॉलिसी (सार्वजनिक नीति), अन्तरराष्ट्रीय रिलेशंस (अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ), एल्गोरिदम डिजाइन, वेब आर्किटेक्चर, एसईओ / एसईएम मार्केटिंग र यूआई डिज़ाइन इत्यादि शामिल छ।
त, यदि तपाईं दुबई को उभरते नौकरी बजार मा आफु को पेश गर्न को लागि तैयार हो, त तपाईंलाई हामी तपाईंलाई बताइन्छ कि तिमी कहां देखि शुरू गर्न चाहिए! यो गाइड तपाईं वीजा, स्पन्न्सरशिप, नौकरिहरु र साक्षात्कार युक्तिहरु को देखने को लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण कदमहरु र जानकारी प्रदान करेगी।
दुबई मा सजिलै नौकरी प्राप्त गर्न को लागि यिनी सरल स्टेप्स को पालन करे
योग्य वीजा प्राप्त करे
यदि तपाईं दुबई मा काम गर्न को सोच रहे हो, त तपाईं एक कामकाजी भिजा को आवश्यकता हुनेछ। राम्रो खबर यो छ कि, यदि तपाईं लाई दुबई कम्पनी द्वारा नौकरी मा राखियो हो, त तपाईंको लागि यो भिजा सजिलै संग मिलन सक्छ।
र चूंकि तपाईंलाई एक कामकाजी भिजा को आवश्यकता हुन्छ, यसैले तपाईंलाई दुबई मा एक नौकरी को स्थिति मिल जान मा दुबई जाने को रास्ता तपाईंको लागि आसान हुन्छ। यो भनिएको छ कि, नौकरी को खोज को लागि आगन्तुक वा पर्यटक भिजा मा अमीरात मा प्रवेश गर्न संभव छ र फेरि रोजगार भेट पछि तपाईंको भिजा स्थिति को बदलन पनि सक्छ।
दुबई को अधिकांश आगंतुकों को समय देखि पहिले नै भिषा प्राप्त गर्न को आवश्यकता छैन, तपाईंलाई एक ओन अरिवल (आगमन मा) भिजा दिए हुनेछ।
तपाईंलाई 90 दिन सम्म रहन छ त भिजा को आवश्यकता छैन
केहि देशहरुमा भिजा को नियम अलग हुन्छन् जस्तै को निम्न देशहरुमा नौकरी खोज गर्ने व्यक्तिहरुलाई देश छोडने या कार्य भिजा को लागी आवेदन गर्न देखि पहिले आउनुहोस 90 दिनहरु पछि UAE मा रहन को अनुमति छ। त यदि तपाईं यिनी देशो मध्ये मध्ये एक को निवासी छ र तपाईं केवल 90 वा उससे कम दिन को लागि दुबई जा रहयो त तपाईंलाई भिजा को आवश्यकता छैन।
किन नागरिकहरु को 30 दिन को लागि भिजा को आवश्यकता छैन?
निम्न देशहरु को नागरिकों लाई पनि पहिले देखि भिषा प्राप्त गर्न को आवश्यकता छैन, हुनत आगमन मा (ऑन अरिवल) जारी गरियो वीजा केवल 30 दिनहरुको लागि नै चलेगा। यस्तो भनिएको छ कि, यिनी देशहरु को नागरिक 60 दिन सम्म आफ्नो भिजा को बढन सक्छ:
जस्तै कि यो पर्यटक भिजा तपाईंको नौकरी खोज गर्न को लागि देश मा प्रवेश गर्न को एक राम्रो तरीका छ, तर यो महत्वपूर्ण छ कि तपाईं या त कामकाजी भिजा मिल जान, बशर्ते कि तपाईंलाई रोजगार मिल्यो, या जब तपाईंको भिजा समाप्त हुन्छ त तपाईं देश छोड्नुहोस्। यदि तपाईं को काम गरिरहेको भेटियो जबकि तपाईंको पास एक पर्यटक भिजा नै छ त तपाईं जेल या जुर्माना हुन सक्छ र निर्वासित गरिन सक्छ।
राम्रो खबर यो छ कि, एक पल्ट तपाईंलाई नौकरी मिल जान पछि, भिजा प्रक्रिया धेरै हद सम्म हाम्रो हातहरु बाट बाहिर जान्छ। आफ्नो नियोजक को केहि कागजातहरु संग प्रदान गर्न को लागि, जस्तै कि तपाईंको पासपोर्ट नम्बर, उनि तपाईंको लागि पूरा स्पन्न्सरशिप र भिजा प्रक्रिया को संभाल लेंगे। थोडी बुरी खबर यो छ कि, तपाईंको काम पूर्ण तरिकाले गरेको छैन।
आफ्नो स्वास्थ्य कार्ड र लेबर (श्रम) कार्ड प्राप्त करे
जब सम्म तपाईंको कामकाजी भिजा को प्रक्रिया को जा रही छ तब सम्म तपाईंलाई तपाईंको स्वास्थ्य र चिकित्सा सेवाहरु विभाग को आफ्नो मेडिकल रेकर्ड, पासपोर्ट प्रतियां, फोटो, नौकरी प्रस्ताव पत्र र भिजा आवेदन जमा गर्न को आवश्यकता हुनेछ। तपाईंलाई एचआईवी, हीपेटाइटिस सी र टीबी जस्तै बीमारियों को नकारने को लागि रक्त परीक्षण पनि गरेराना हुनेछ। फिलहाल, संयुक्त अरब अमीरात उन बीमारियों वाला विदेशी लाई अमीरात मा रहन को इजाजत नहीं दि्छ। एक पल्ट जब तपाईं सबै परीक्षण को नजिकै गरेर लेंगे त तपाईंलाई एक स्वास्थ्य कार्ड जारी गरिनेछ, जो दुबई मा विदेशी श्रमिकों को लागि अनिवार्य छ। यसैले यदि तपाईं वाकई मा दुबई या संयुक्त अरब अमीरात मा काम गर्न चाहते हो त तपाईंको स्वास्थ्य राम्रो हुनु जरूरी छ।
तपाईंलाई एक लेबर (श्रम) कार्ड को पनि आवश्यकता हुनेछ जसमा तपाईंलाई तपाईंको पासपोर्ट फोटो, रोजगार अनुबंध, प्रवेश भिजा, चिकित्सा रेकर्ड र तपाईंको नियोजक को श्रम लाइसेन्स को श्रम मंत्रालय मा पठाउन हुनेछ।
आखिर मा, तपाईंलाई रिसीडेंस (निवास) भिजा को आवश्यकता हुनेछ, जो दुबई को सामान्य डायरेक्टरेट को रिसेडिन्सी र फररर्स अफ अफर्स (रेसिडेंसी र विदेश मामलों को सामान्य निदेशलय) द्वारा जारी गरिएको छ। तपाईंलाई व्यक्तिगत रूप बाट जान्छ, जहाँ तपाईं एक फारम भरेंगे, आफ्नो पासपोर्ट, मेडिकल रिकर्ड्स, हेल्थ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल इन्ट्री पर्मिट, पासपोर्ट फोटो, आफ्नो श्रम कार्ड को एक प्रति र आफ्नो श्रम कार्ड प्रसंस्करण देखि रसीद प्रदान गर्नेछ। यसको लागि तपाईंलाई पूर्ववर्तीारी करनी हुनेछ र यिनी सबै वस्तुहरु को एक सूचि बनानी हुनेछ ताकि पछि मा यसको लागि समय खराब न हो।
र बस भयो! तपाईंको कामकाजी भिजा, स्वास्थ्य कार्ड, लेबर कार्ड र निवास भिजा तयार हुदै तपाईं कानूनी रूप देखि दुबई मा काम गर्न शुरु गरेर सकेंगे।
आफ्नो जगत मा बजार को ठेगाना लगाए
अब जस्तै अमीरात को समग्र वित्तीय परिस्थिति स्थिर हो रही छ, सबै नौकरी को बजार राम्रो प्रदर्शन नहीं पनि कर सकते। यस्तो भन्यो जा रहेको छ कि केहि यस्तो क्षेत्र हो जो एक्सपो 2020 मा दुबई को होस्टिंग कर्तव्यों को तैयारी मा खिल उठने को आशा गर्दै छन्। तल केहि बजार को जानकारी दी गई छ जहां नौकरी खोज गर्ने वालों को सफलता मिल सक्छ:
उपर्युक्त क्षेत्रहरु मध्ये मध्ये धेरै राम्रो प्रदर्शन गर्दै छन् कि तनख्वाह मा बढौती हुन्छ नै रहन को आशा छ। लिंक्डइन को MENA रिक्रूटिंग ट्रेंड्स 2017 (मेना भर्ती रुझान 2017) रिपोर्ट र पनि अगाडी खोज गर्दछ र ठेगाना लाग््छ कि नौकरी खोज गर्ने वालों को दुबई मा रोजगार खोज को लागि निम्नलिखित विभाग मा सबै भन्दा राम्रो मौका छ:
ठूलो कम्पनीहरु को जांचे
यस्तो केहि कम्पनीहरुहरु हो जो दुबई मा आफ्नो दृढ भर्ती र उत्कृष्ट स्थान मा काम गर्न को लागि राम्रो तरिका देखि चल रहे हो। उन व्यवसायों मध्ये मध्ये शीर्ष 10 मा रिटेल चैन ध वन, स्पलैश, एस्टी लडर र हिल्ती अमीरात, मीडिया टाइकून ओमनिकम, आईटी विशेषज्ञ ईएमसी², हिल्टन वर्ल्डवाइड, वेबर शन्डविक व्यावसायिक सेवा र फेडेक्स शामिल हो। यदि तपाईं वाकई मा एक कररस्त सैलरी संग भव्य करियर बनाउन चाहते हो त यस्तो कुनै कम्पनी को विचार कीजिए!
अनलाइन आवेदन करे
दुबई मा कस सी कंपनियां भर्ती गर्दै रही हो, यसको बेहतर विचार प्राप्त गर्न को लागि, दुबई मा नौकरी तलाशने वालों को बीच LinkedIn.com र bayt.com धेरै पसंदीदा छ। जब खोज र शुरू गर्न को लागि केहि अन्य राम्रो ठाँउ पनि छ।
निम्नलिखित साइटहरु मा तपाईं नौकरी र यिनीटर्नशिप खोज सकते हो। कृपया यिनी मा रजस्टर गरेरवाए र नियमित रूप देखि हेर्दै।
Internship खोज को लागि केहि विशिष्ट महान साइटहरुमा शामिल हो:
हाईस्कूल विद्यार्थी को नियुक्ति को लागि:
एक राम्रो भर्तीकर्ता को ध्यान मा राखे
दुबई को धेरै सारा व्यवसाय मालिक भर्तीकर्ता को माध्यम देखि प्रतिभा को काम मा राख छ। कुनै एजेन्सी संग काम गर्न धेरै साधारण छ, र अझै पनि अमीरात को भित्र नौकरी प्राप्त को यो सबै भन्दा राम्रो तरीका छ। संयुक्त अरब अमीरात र दुबई मा यिनी श्रेणी मा तपाईं एजेन्सी यानि भर्तीकर्ता को बारे मा खोज गर्न सक्छन्:
इंजीनियरिंग, मार्केटिंग र प्रबंधन नौकरी को लागि: BAC मिडल ईस्ट
PR (पब्लिक रिलेशंस), पब्लिशिंग, मार्केटिंग र कम्युनिकेशन्स जब को लागि: MCG & Associates
मार्केटिंग र कम्युनिकेशन नौकरी को लागि: जिवारो पार्टनर्स
कन्फरन्स, इवेंट, आतिथ्यसत्कार को लागि: ईएसपी इंटरनेशनल
विकास, निर्माण, ईन्जिनियरिङ्, र पब्लिक सेक्टर नौकरी को लागि: रबर्ट मुरे
एजेन्सी धेरै सी ठूलो कम्पनीहरु संग सम्बन्ध राख्छ र उनलाई उनि कौशल्य कर्मचारीहरु को आपूर्ति गर्दछ। तर यदि कुनै एजेन्सी को माध्यम ले काम गर्ने निर्णय लेते हो, त उन कम्पनीहरु को खोज गर्नुहोस जो नियोक्ता को नजिकै देखि कमीशन लेते हो, न कि तपाईंको। यस्तो भर्ती गर्न वालों देखि सावधान रहें जो नौकरी खोज गर्ने वालों देखि ठूलो फीस चार्ज एकत्र गर्छन, यसमा घोटाले हुनु को गुंजाईश हुन्छ।
आफ्नो सीवी यानी रिज्यूमे को मजबूत र आकर्षित बनाए
तपाईंको नौकरी खोज मा सबै महत्वपूर्ण भूमिका तपाईंको सीवी को रहती छ।
ठूलो कम्पनी को एचआर मैनेजर सबै को साक्षात्कार को लागि बुला नहीं सकते, यसैले उनि पहिले सबै को सीवी को मापदंड देखि फिल्टर गर्छ। दुबई को नौकरी बजार बेहद प्रतिस्पर्धी छ, र औसतन एक भर्ती तपाईंको रिज्यूमे को जांच मा धेरै समय नहीं खर्चएंगे। त महत्वपूर्ण यो हुनेछ कि तपाईंको सीवी उनलाई केहि नै सेकेंड्स मा आकर्षित गरेर ले! यदि तपाईंको नजिकै धेरै राम्रो कौशल्य र प्रतिभा छ तर यदि तपाईं उसलाई आफ्नो रिज्यूमे मा प्रकाशित नहीं गरेर पाए त यो तपाईंको तपाईंको एक एक नकारात्मक कुरा हो। आफ्नो सीवी को अधिक मजबूत र आकर्षित बनाउन को लागि तपाईं कुनै विशेषज्ञ को सहायता पनि ले सकते हो जो केहि नै पडोस मा तपाईंको सीवी लाई चमका देंगे। यदि तपाईं मुद्रा खर्च नहीं चाहते हो र सिर्फ निःशुल्क निर्देश नै चाहन्छ त जबबज तर सीवी बनाउन को टिप्स देख सकते हो।
एक राम्रो नेटवर्क बनाए
दुबई आंतरिक रूप देखि र कर्मचारी देखि संदर्भित उम्मीदवारहरु लाई भर्ती गर्न को लागि जान्दछ। यदि तपाईं कम्पनी को अंदर कुनै को ठेगाना हो, त तपाईं नौकरी दिन को संभावना केहि प्रतिशत बढ्छ। यदि तपाईं नेटवर्किंग कार्यक्रमहरु को लागि दुबई नहीं पहुँच सकते हो, त पनि तपाईं नेटवर्क बना सकते हो। न केवल समुदायहरु र सोशल मीडिया नेटवर्क देखि नै तपाईं जुड सकते हो, बल्कि तपाईं दुबई र संयुक्त अरब अमीरात मा चल रहे जब फेयर आदि को को खोज पनि छ। यसको लागि तपाईं फेसबुक जस्तै सोशल मिडिया र लिंक्डइन जस्तै मंच को उपयोग गरेर यो सबै जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ।
नौकरी चाहनुकहरुको लागि अन्य उपयोगी टिप्स
आफ्नो अनलाइन शख्सियत को संवारे तपाईंलाई एक राम्रो जब प्राप्त गर्न को लागि अनलाइन एक्टिव रहना हुनेछ र प्रतिष्ठित प्लेटफार्म मा आफ्नो उपस्थिति बनाए रखनी हुनेछ। हुन सक्छ यदि कुनै भर्तीकर्ता को तपाईंको रिज्यूमे रुचि आयो र त्यो तपाईंलाई Google गर्दछ र केवल तपाईंको पुरानी माईस्पेस चित्रहरु लाई पाता छ, त त्यो तपाईंको प्रभाव राम्रो छैन। तपाईं न केवल आफ्नो सोशल मीडिया नेटवर्क को पेशेवर रूप देखि तैयार गर्न को लागि बल्कि बल्कि तपाईं अनलाइन एसईओ बनाएर आफ्नो लिंक्डइन र बेयट जस्तै वेबसाइटहरु मा प्रोफाइल को मजबूत बनाउन हुनेछ।
यस्तो नौकरी को लागि आवेदन न करे जसको लागि तपाईं लायक नहीं हो धेरै पल्ट यस्तो हुन सक्छ कि कुनै नौकरी को रिक्त आ आएको छ र त्यो जब को प्रोफाइल, स्थान या तनख्ववाह तपाईंलाई आकर्षित गर्छ। अब चूँकि तपाईं जगत देखि मिलन प्रतिष्ठा र सर्लोभ देखि आकर्षित छ, तपाईं बेशक त्यो जब को पाना चाहेंगे। तर हाम्रो राय यो छ कि तपाईं कुनै पनि जबब को लागि आवेदन गर्न देखि पहिले आफु को लायकात जांचे, र साथ नै साथ कि जब देखि जुडे सबै हालातो मा पनि विचार करे। कुनै पनि जब मा काम शुरू गर्न नै महत्वपूर्ण छैन हुन्छ बल्कि तिमी उन ठाँउ मा ठीके रहन पनि जरूरी छ र उनको साथ सबै परितो देखि निपटना छ। त यो स्थिति को ध्यान मा राखन यदि तपाईं पूरी तरिका देखि आफैलाई कि जब को लागि उचित प्राप्त छ तभी उनको लागि आवेदन गर्न पर्छ।
धैर्य राख्नुहोस्: कुनै को यदि त्वरित नौकरी मिलछन त जरूरी छैन कि सबै को जल्द नै मिले। राम्रो नौकरी मिलना एक लामो प्रक्रिया हो र यसको लागि समय लाग्न सक्छ किन को यस तेज युग मा कडी प्रतिस्पर्धा छ र कुनै पनि राम्रो नौकरी को स्थिति को लागि उसलाई धेरै गुना मान्छे आवेदन गर्दै छन्। त बेहतर यो हुनेछ कि चिंता न करे, जल्दबाज़ी न करे र बस आफ्नो कौशल्य र प्रतिभा बढा। बेशक यो तिमी राम्रो काम प्राप्त गर्न मा मदद गर्नेछन्। वैसे दुबई मा भर्ती प्रक्रिया केहि मौसम मा नै चलती छ जस्तै कि अधिकांश भर्ती जनवरी देखि मार्च महिना सम्म हुन्छ र लगभग पूर्ण तरिका देखि रमजान को पवित्र महिना र गर्मी को महीनों को समयमा रुक सी जान्छ। दुबई, अबू धाबी र संयुक्त अरब अमीरात मा नौकरी मिल मा6देखि 12 महिना को समय साधारण छ, त त्यहि धीरे राख राख राख!
भिजा - भारतीयहरु को लागि दुबई मा प्रवेश लेने को लागि सबै भन्दा पहिले चिंता
संयुक्त अरब अमीरात फारस को खाड़ी मा स्थित एक अरब देश छ। यो ओमान र सउदी अरब संग सीमाहरु संग जुडा छ। यहाँ अरबी अधिकारिक भाषा हो।
संयुक्त अरब अमीरात मा एक विदेशी को रूप मा रोजगार को अवसरों को खोज को लागि आवश्यक संसाधनों को तल दिए गएको छ।
दुबई मा वर्क परमिट को लागि आवेदन कसरि गर्नुहोस?
जस्तै दुबई 21 वें शताब्दी को विश्व को प्रतियोगिता को अगाडी अगाडी बढ रहेको छ, यस तेजी देखि विकास को बनाए राखन को लागि श्रमिहरु लाई मांग पनि उतना नै तेजी देखि बढ रही छ। अर्थव्यवस्था को चलने वाला लगभग सबै क्षेत्रहरुमा अनुमानित वृद्धि संग, रोजगार को अवसर भरपूर छ र यस प्रकार हरेक वर्ष देश मा प्रवेश गर्ने कुशल र अकुशल श्रमिकों को प्रदर्शन को संख्या बढ्दै छ।
दुबई मा आने देखि पहिले धेरै एक्सपैट्स पहिले देखि नै रोजगार प्राप्त गर चुके हो र उनलाई वर्क परमिट को लागि सम्बंधित अधिकारियों देखि निपटने को आवश्यकता छैन। नियोजक को भिजा आवेदन प्रक्रिया को जिम्मेदारी लेनी हुनेछ र कर्मचारी को तरफ संग सम्बन्धित विभागहरु मा आवेदन गर्न चाहिए। भिजा को खरीद संग सम्बन्धित वित्तीय लागतहरु को भुगतान नियोजिटर तिर देखि हुनु कानून द्वारा आवश्यक छ।
दुबई मा रोजगार को लागि जरूरी हो यस्तो विभिन्न प्रकार को वर्क परमिट हो र यो रोजगार को प्रकार र अवधि को आधार मा भिन्न हुन्छन्। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ले भिजा प्राप्त गर्न को प्रक्रिया को सरल बनाउन को कोशिश छ, तर अझै पनि धेरै दस्तावेजहरु र वैधताहरु हो जसको पालन हुनु पर्छ। भिजाको लागि आवेदन प्रक्रिया मा सम्पूर्ण गाइडिका तल दिइएको छ।
प्रवेश परमिट र कार्य परमिट को कार्यवाई
तपाईंको वर्क परमिट प्राप्त गर्ने दिशा मा पहिलो कदम हो श्रम मंत्रालय देखि अनुमोदन प्राप्त गर्न। यसको लागि नियोक्ता नै कर्मचारी को ओर देखि आवेदन गर्नेछ। यदि अनुमोदन कुनै पनि मुक्त क्षेत्र मा आवेदन को लागि छ, त अनुमोदन कर्मचारी संयुक्त अरब अमीरात मा प्रवेश करे उसलाई पहिले दिए जाना चाहिए। यो अनुमोदन प्रक्रिया को समयमा, श्रम मंत्रालय सामान्यतया यो जाँच गरेर आफ्नो निर्णय लेता छ कि कुनै पनि संयुक्त अरब अमीरात को नागरिक बेरोजगार न हो जो प्रासंगिक नौकरी गर्न मा सक्षम हो। यसैले यूएई सरकार को यस उत्तम विचार देखि प्रेरित भिजा प्रक्रिया पनि त्यहि को अनुरूप हुन्छ।
अनुमोदन मिल जान मा, मंत्रालय एक प्रवेश परमिट भिजा जसलाई पिन यानि गुलाबी भिजा पनि भनिन्छ, उनको जारी गर्दछ जो आवेदकों को कानूनी रूप देखि संयुक्त अरब अमीरात मा प्रवेश गर्न को अनुमति दि्छ। यो परमिट जारी हुने मिति देखि 60 दिनहरुको लागि मान्य छ र धारक को संयुक्त अरब अमीरात मा 30 दिन को अवधि को लागि रहन अनुमति दि्छ, जस दुई पल्ट बढाया जान सक्छ।
कर्मचारी को देश मा प्रवेश पछि पछि, नियोजक श्रम कार्ड को आवेदन को प्रक्रिया शुरू गर्दछ। मुक्त क्षेत्र को रोजगार को लागि एक आईडी कार्ड जारी गरिनेछ, आईडी र श्रम कार्ड दुवै सामान्यतया2वर्ष को लागि मान्य हुन्छन्। कर्मचारी को देश मा प्रवेश हुनुहोस पछि साठ दिनहरुमा उनलाई निवास वीजा प्राप्त गर्न को सबै औपचारिकताओं को पूरा गर्न हुन्छ। आखिरी समय सम्म प्रतीक्षा गर्न को बजाए जितनी जल्दी हो सकें यिनी प्रक्रियाहरु लाई पूरा गर्न को सल्लाह दी जान्छ।
कर्मचारी को एक सम्बंधित फारम प्राप्त गरेर को अमीरात आईडी सेवा केन्द्र जाना हुनेछ। ओरिजिनल वैध पासपोर्ट र वैध प्रवेश पर्मिट आवश्यक छ।
निओक्ता अब निवास भिजा को लागि आप्रवासन प्राधिकरणहरु मा आवेदन गर्न सक्छ; कर्मचारी को आफ्नो मेडिकल फिटनेस टेस्ट को लागि सरकारी अस्पतालहरु मा जाना हुनेछ। केहि व्यवसायहरु लाई कर्मचारीहरु लाई प्रासंगिक शैक्षिक योग्यता प्रदान गर्न को पनि आवश्यकता हुन्छ जो UAE मा तपाईंको घर देश को साथ-साथ विदेश मामलों को मंत्रालय मा संयुक्त अरब अमीरात दूतावास द्वारा प्रमाणित गरिनेछ।
नियोक्ता को नजिकै मेडिकल फिटनेस टेस्ट को परिणाम आ जाना मा त्यो सबै सहायक दस्तावेजहरु संग विभाग को नैतिकलाइजेशन एन्ड रिसीडेंसी दुबई (डीएनआरडी) मा जान सक्छ र कर्मचारी को पासपोर्ट मा भिजा लगाया जान सक्छ।
लेबर कार्ड (वर्क परमिट) को लागि आवश्यक दस्तावेज
आवेदक को फोटोग्राफ
वैध पासपोर्ट (कम देखि कम छह महिना को वैधता आवश्यक)
रोजगार अनुबंध को तीन प्रतियां - एक नियोक्ता को लागि, एक कर्मचारी को लागि र एक श्रम मंत्रालय को लागि
स्पन्न्सर कम्पनी को वैध व्यापार लाइसेन्स
यिनी आवश्यकताहरु मा बदलाव आ सकते हो, यसैले संगत सम्बंधित दूतावास देखि अद्यतन जानकारी प्राप्त गरेर ले
रेसिडेंस (निवासी) भिजा को लागि आवेदन
वर्क परमिट प्राप्त गर्न को लागि, कर्मचारी को पहिले निवास वीजा दिए जाना, जो आम तौर मा तीन वर्ष को अवधि को लागि मान्य हुन्छ। विभिन्न प्रकार को निवास वीजा हुन्छ। निवास भिजा को लागि निम्न कागजात आवश्यक हो:
एक पूर्ण रूप देखि भरा भयो आवेदन पत्र
पासपोर्ट कद को तस्वीरहरु
कर्मचारी को मूल पासपोर्ट र उनको प्रति
वैध कम्पनी कार्ड को प्रति
कम्पनी को वैध व्यावसायिक लाइसेन्स
श्रम मंत्रालय जारी गरिएको प्रवेश परमिट
जब सम्म तपाईंको कामकाजी भिजा को प्रक्रिया को जा रही छ तब सम्म तपाईंलाई तपाईंको स्वास्थ्य र चिकित्सा सेवाहरु विभाग को आफ्नो मेडिकल रेकर्ड, पासपोर्ट प्रतियां, फोटो, नौकरी प्रस्ताव पत्र र भिजा आवेदन जमा गर्न को आवश्यकता हुनेछ।
त, यो थियो दुबई सिटी कम्पनी को ओर देखि तपाईंलाई दुबई, अबू धाबी र संयुक्त अरब अमीरात (संयुक्त अरब अमीरात) मा नौकरी प्राप्त र भिजा को बारे मा विस्तृत जानकारी। कृपया तपाईंको कुनै पनि प्रश्नो या सुझाव को लागि हमसे संपर्क करे। हाम्रो ओर देखि अधिक उपयोगी जानकारी को लागि कृपया हाम्रो साथ बने रहयो। तपाईंलाई आफ्नो सपनो को जब को लागि हाम्रो शुभकामनाए तपाईंको साथ छ!